ONE oo u baaqday caalamka - BBC Somali
ONE oo u baaqday caalamka
6 Oktoobar 2014
Lahaanshaha sawirka un.mdg.logo
Image caption MDG ayaa ku eg sanadka danbe iyadoo lagu badalayo hiigsasho saboolnimada la yaraynayo sanadka 2030-ka
Warbixinta ayaa sheegtay in horumar wayn laga gaaray meelo badan si loo yareeyo saboolnimada. Laakiin waxaa qatar ku jira mustaqbalka sidii loo yareen lahaa saboolnimada iyadoo ay badanayso sinaan la'aanta, shaqo la'aanta dhalinyarada, iyo wax ka qabad la'aanta cimilada isbadalaysa.
Hayadda ONE ayaa sheegtay in badanaa deeq bixiyayaasha inay ku guul daraysteeninay gargaarkooda ku beegan dowladaha sa oolka ah.
Warbixinta ayaa sheegtay in dowladaha Afrika badanaa aysan maalgalin caafimaadka, beeraha iyo waxbarashada oo ay balanqaadeen inay maalgalinayaan si saboolnimada loola dagaalo.
Sanadka danbe markii lagu dhawaaqo hiigsashada cusub ee 2030-ka ee lagu doonayo in lagu dhameeyo saboolnimada aadka u daran, waxaa go'aan lagu gaari doonaa sidii loo maalgalin lahaa taasoo ah fursad taariikhi ah ayay sheegtay warbixinta.